SADDEX Kamida Xiddigaha Ugu Muhiimsan Liverpool Oo Tababarka Kusoo Laabtay Kahor Kulanka Holaca Ah Ee Everton - Gool24.Net
SADDEX Kamida Xiddigaha Ugu Muhiimsan Liverpool Oo Tababarka Kusoo Laabtay Kahor Kulanka Holaca Ah Ee Everton
Kooxda Liverpool ayaa ah mid helaysa war wanaagsan kahor kulanka ay Sabtida booqanayso kooxda ay magaalo xifaaltamaan ee Everton ciyaar Merseyside Derby ah oo aad u xiiso badan.
Warka u wanaagsan Reds ayaa ah inay tababarka kooxdeeda kusoo noqdeen saddexda xiddig ee kala ah daafaca dhexe ee Joel Matip, garabka weerar ee Sadio Mane iyo waliba khadka dhexe ahna saxeexa cusub ee Thiago Alcantara.
Thiago iyo Mane ayaa labadaba lagu qasbay inay karantiin mudo galaan kaddib markii laga helay xanuunka Korona Fayras halka uu Matip sabab dhaawac saddexdii kulan ee ugu dambeeyay ee horyaalka dhaawac ku maqnaa.
Mane iyo Thiago oo labaduba kasoo kabtay xanuunka iyo Matip oo dhaawaca kasoo laabtay ayaa tababarkii Liverpool ee shalay oo Salaasa ahayd kasoo muuqday waana xilligii ugu fiicnaa ee ugu macquulsanaa maadaama ay Sabtida kahor tagayaan Everton oo aan wali hal dhibic lumin.
Everton ayaa soo guuleysatay dhammaan afarta kulan ee ilaa hadda ay kasoo ciyaartay Premier League iyagoo halka ugu sarreysa ka jooga miiska kala sarreynta.
Dhammaan saddexda ciyaaryahan ee usoo laabtay Reds ayay macquul tahay in dib shaxda loogu soo wada celiyo xilli ay kooxdu doonayso inay kasoo kabato guuldarradii bahdilaada weyn ahayd ee Aston Villa kasoo gaadhay toddobaadkii hore.
Thiago ayaa isagu maqnaa labadii kulan ee Arsenal iyo Villa halka uu Mane ka maqnaa kaliya kulankii dambe ee Villa, 29 sano jirka saxeexa cusub ah ayaa hore qish uga bixiyay inuu karantiinka ka baxay kaddib markii uu barihiisa bulshada ku baahiyay sawir uu badhtamaha magaalada ku galay.
Ugu dambayn, Klopp ayay u badantahay inuu ka maqnaan doono Naby Keita oo la xusayo inuu ku jiro liis xulkiisa Guinea ah oo laga helay xanuunka dhawaan.